ကားတဈစီးရဲ့ ကိုယျပိုငျနံပါတျ (သို့မဟုတျ)ခကျြစီ နံပါတျ (Chassis No.) ဆိုတာ..... - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ကားတဈစီးရဲ့ ကိုယျပိုငျနံပါတျ (သို့မဟုတျ)ခကျြစီ နံပါတျ (Chassis No.) ဆိုတာ.....
VIN (Vehicle Identification Number) လို့လညျး ချေါတဲ့ ခကျြစီ နံပါတျဆိုတာ မျောတျောကားတဈစီးစီရဲ့ ကိုယျပိုငျနံပါတျတှဖွေဈပွီ တဈစီးနဲ့ တဈစီးလုံးဝမတူညီတဲ့ ကုတျတှနေဲ့သတျမှတျပေးထားကွတာပါ။
ခကျြစီနံပါတျမှာ ကိနျးဂဏနျးနဲ့ အက်ခရာ ၁၇ လုံး ပါဝငျပွီး ကားတဈစီးကိုသကျသခေံဖို့ အသုံးပွုကွပါတယျ။ မျောတျောကားတှသောမကပဲ မျောတျောဆိုငျကယျ၊ စကူတာ စတာတှမှောလညျး ခကျြစီ နံပါတျကို အသုံးပွုကွ ပါသေးတယျ။
လူတှမှော မှတျပုံတငျရှိသလိုပဲ ခကျြစီ နံပါတျက ကားတှရေဲ့မှတျပုံတငျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
လူတှရေဲ့ မှတျပုံတငျထဲမှာ အသကျ၊ လူမြိုး၊ ဘာသာ၊ ထငျရှားတဲ့အမှတျအသား၊ အလုပျအကိုငျ စတာတှပေါဝငျ သလို မျောတျောကားတှရေဲ့ ခကျြစီ နံပါတျတှမှောလညျး သူတို့ရဲ့ အငျဂငျြအမြိုးအစား၊ ပါဝငျတဲ့နညျးပညာ၊ စှမျးဆောငျရေ၊အသုံးပွုထားတဲ့ပစ်စညျးအသေးစိတျ အခကျြအလကျတှကေို ကွညျ့ရှုနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုခုခြို့ယှငျးလို့ ပစ်စညျအသဈလဲရတော့မယျ ဆိုတဲ့အခါမှာ မှနျကနျတဲ့ ပစ်စညျးအမြိုးအစားကို ရှာဝယျဖို့ အသုံးပွုကွပါတယျ။ တခွားသကျသခေံအနနေဲ့လညျး အသုံးပွုကွပါသေးတယျ။ (ဥပမာ-စဈဆေးရေး)
ခကျြစီနံပါတျတှကေိုတော့ ISO 3833 (ကားတှရေဲ့ စံသတျမှတျခကျြ) တှနေဲ့ပဲ တရာဝငျ ထုတျလုပျသူတှကေနေ သတျမှတျပေး ရပါတယျ။
ခကျြစီတှကေို စပွီးအသုံးပွုခဲ့ကွတဲ့ ၁၉၅၄ တုနျးကတော့
ISO standard သတျမှတျခကျြတှေ မရှိသေးပါဘူး။ ကားထုတျလုပျသူအသီးသီးကသူတို့သတျမှတျခကျြတှနေဲ့ပဲ သူတို့ အသုံးပွုကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှသာ နိုငျငံတကာ Standard တှကေ ထှကျပျေါလာတာပါ။
စံသတျမှတျခကျြအရ ကားတဈစီးတိုငျးရဲ့ ခကျြစီလို့ချေါတဲ့ VIN နံပါတျ တိုငျးမှာ ဂဏနျး ၁၇ လုံး ပါဝငျရပါတယျ။
ကနျ့သတျခကျြတှအေနနေဲ့ကတော့ အက်ခရာ I (i)/O (o)/Q (q) စတာတှေ ပါဝငျလို့မရပါဘူး။ One (1)/Zero(0) စတဲ့ဂဏနျးတှနေဲ့ ရောသှားမှာစိုးလို့ပါ။
ခကျြစီ နံပါတျတှကေို မြားသောအားဖွငျ ကားရဲ့ လကောမှနျအောကျက ဒတျရှိဘုတျပျေါမှာ မွငျနိုငျမှာဖွဈပွီး (လကောမှနျအရှကေ့နမွေငျနိုငျ) ယာဉျမောငျးဘကျက တံခါးဂမျြ့မှာလညျး စတဈကာလေးတှနေဲ့ ကပျထားလေ့ ရှိပါတယျ။ တဈခြို့ကားတှမှောတော့ အငျဂငျြ၊ အမိုး၊ တဈခွားသော အစိတျအပိုငျးတှမှောလညျး ခကျြစီ (VIN) ကိုထညျ့ထားကွပါသေးတယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ Car Manufacturer တိုငျးမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ Server နဲ့ Website တှေ ရှိကွပွီး အဲ့ဒီကနေ သူတို့ကားတှရေဲ့ ခကျြစီနံပါတျကို တရာဝငျခှငျ့ပွုထားတဲ့ အရောငျးကိုယျစာလှယျ၊ ဆားဗဈသမားတှေ ကွညျ့နိုငျ အောငျ စီစဉျပေးထားပါတယျ။
ယဘေူယအြားဖွငျ့ လူတိုငျးရှာကွညျ့နိုငျတဲ့ ဝဘျဆိုဒျတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါတယျ။
ဥပမာအနနေဲ့ www.autodna.com ဖွဈပွီး ကိုယျ့ကားရဲ့ ခကျြစီ (VIN) ၁၇ လုံး ကိုရိုကျထညျ့ကာ ကားရဲ့အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ရှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Credit;l Original Writer
ယာဉျအပိုပစ်စညျးဆိုငျပေါငျး ၂၅၃၁ ဆိုငျကိုရှာဖှရေနျဤနရောကိုနှိပျပါ။
ကားတစ်စီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် (သို့မဟုတ်)ချက်စီ နံပါတ် (Chassis No.) ဆိုတာ.....
VIN (Vehicle Identification Number) လို့လည်း ခေါ်တဲ့ ချက်စီ နံပါတ်ဆိုတာ မော်တော်ကားတစ်စီးစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေဖြစ်ပြီ တစ်စီးနဲ့ တစ်စီးလုံးဝမတူညီတဲ့ ကုတ်တွေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားကြတာပါ။
ချက်စီနံပါတ်မှာ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ အက္ခရာ ၁၇ လုံး ပါဝင်ပြီး ကားတစ်စီးကိုသက်သေခံဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ မော်တော်ကားတွေသာမကပဲ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ စကူတာ စတာတွေမှာလည်း ချက်စီ နံပါတ်ကို အသုံးပြုကြ ပါသေးတယ်။
လူတွေမှာ မှတ်ပုံတင်ရှိသလိုပဲ ချက်စီ နံပါတ်က ကားတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
လူတွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်ထဲမှာ အသက်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသား၊ အလုပ်အကိုင် စတာတွေပါဝင် သလို မော်တော်ကားတွေရဲ့ ချက်စီ နံပါတ်တွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့ အင်ဂျင်အမျိုးအစား၊ ပါဝင်တဲ့နည်းပညာ၊ စွမ်းဆောင်ရေ၊အသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်းအသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုချို့ယွင်းလို့ ပစ္စည်အသစ်လဲရတော့မယ် ဆိုတဲ့အခါမှာ မှန်ကန်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ရှာဝယ်ဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ တခြားသက်သေခံအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုကြပါသေးတယ်။ (ဥပမာ-စစ်ဆေးရေး)
ချက်စီနံပါတ်တွေကိုတော့ ISO 3833 (ကားတွေရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်) တွေနဲ့ပဲ တရာဝင် ထုတ်လုပ်သူတွေကနေ သတ်မှတ်ပေး ရပါတယ်။
ချက်စီတွေကို စပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ၁၉၅၄ တုန်းကတော့
ISO standard သတ်မှတ်ချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ ကားထုတ်လုပ်သူအသီးသီးကသူတို့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပဲ သူတို့ အသုံးပြုကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှသာ နိုင်ငံတကာ Standard တွေက ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
စံသတ်မှတ်ချက်အရ ကားတစ်စီးတိုင်းရဲ့ ချက်စီလို့ခေါ်တဲ့ VIN နံပါတ် တိုင်းမှာ ဂဏန်း ၁၇ လုံး ပါဝင်ရပါတယ်။
ကန့်သတ်ချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ အက္ခရာ I (i)/O (o)/Q (q) စတာတွေ ပါဝင်လို့မရပါဘူး။ One (1)/Zero(0) စတဲ့ဂဏန်းတွေနဲ့ ရောသွားမှာစိုးလို့ပါ။
ချက်စီ နံပါတ်တွေကို များသောအားဖြင် ကားရဲ့ လေကာမှန်အောက်က ဒတ်ရှိဘုတ်ပေါ်မှာ မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး (လေကာမှန်အရှေ့ကနေမြင်နိုင်) ယာဉ်မောင်းဘက်က တံခါးဂျမ့်မှာလည်း စတစ်ကာလေးတွေနဲ့ ကပ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကားတွေမှာတော့ အင်ဂျင်၊ အမိုး၊ တစ်ခြားသော အစိတ်အပိုင်းတွေမှာလည်း ချက်စီ (VIN) ကိုထည့်ထားကြပါသေးတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Car Manufacturer တိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Server နဲ့ Website တွေ ရှိကြပြီး အဲ့ဒီကနေ သူတို့ကားတွေရဲ့ ချက်စီနံပါတ်ကို တရာဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ အရောင်းကိုယ်စာလှယ်၊ ဆားဗစ်သမားတွေ ကြည့်နိုင် အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် လူတိုင်းရှာကြည့်နိုင်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ www.autodna.com ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကားရဲ့ ချက်စီ (VIN) ၁၇ လုံး ကိုရိုက်ထည့်ကာ ကားရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။